Global Voices teny Malagasy » Iran: Balatarin, Tantara Momba Ny Median’Olon-Tsotra Nahita Fahombiazana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Oktobra 2017 17:17 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Miranah
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Teknolojia
(Marihana fa efa tamin'ny volana Jolay taona 2008 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy)
Mehdi Yahyanejad no mpanorina ilay tranonkala tena mahomby Balatarin . Balatarin (izay midika hoe ‘ambony indrindra’ amin'ny teny persiana) dia habaky ny vondrom-piarahamonina izay ahafahan'ny mpiserasera mandefa rohy ao amin'ny pejy habaka tian'izy ireo, ahitana fanasongadinana ny iraniana mpijery (mpitsidika ny pejy habaka). Ny hevitra fototra dia fifangaroan'ny reddit , digg , newsvine , ary ny del.icio.us .
Tao anatin'ny roa taona latsaka, lasa loharanom-baovao sy fifandraisana manan-danja ny Balatarin. Mizara amintsika ny tantarany tamin'ny Balatrin ao anatin'ity antsafa ity i Mehdi, izay manana PhD amin'ny Fizika tao amin'ny MIT sady mpiara-manorina sy filoha tale jeneralin'ny Adoptic.com .
Azafady mba lazao aminay ny fotoana nanombohanao ny Balatarin sy ny fomba hanombatombananao ny fahombiazany. Misy antontan'isa ve?
Nanangana ny Balatarin aho tamin'ny 16 Aogositra 2006. Hatreto dia famintinam-baovao 300 000 no nalefa tao amin'ny tranonkala. Nisy ihany koa ny vato 5 tapitrisa sy fanehoan-kevitra 1 tapitrisa. Na izany aza, manombatombana ny fahombiazan'ny Balatarin mihoatra ny antontanisany aho: Marobe ireo bilaogera sy mpanao gazety Iraniana sy ivelan'i Iran mamaky ny Balatarin. Vokatr'izany, mahazo fanangonam-baovao any amin'ny firenena sy sehatra maro ny resadresaka misy ao amin'ny Balatarin.
Nampiasa ny Digg ho maodely ianao. Mihevitra ve ianao fa ho lasa malaza koa ny facebook  Iraniana?
Eny. Heveriko fa mety ho tena mahaliana ny fananana Facebook amin'ny teny Persiana izay ahitana ny oniversite Iraniana sy ny sekoly ambony. Mazava ho azy, miankina amin'ny kalitao famoronana ny tranonkala izany.
Ahoana ny lanjan'ny bilaogera ao amin'ny Balatarin?
Tena lehibe. Bilaogera ny ankamaroan'ireo mpiserasera mavitrika. Toerana ho an'ireo bilaogera Persiana mba hahazo mpamaky marobe amin'ny zavatra nosoratany ny Balatarin. Matetika mahazo fanehoan-kevitra marobe noho ireo lahatsoratra ôrizinaly ao amin'ny bilaogy ny lahatsoratra bilaogy alefa ao amin'ny Balatarin.
Balatarin no nitarika ny median'olon-tsotra ho an'ny Iraniana. Ahoana ny fahitanao ny fivoaran'ny median'olon-tsotra ao amin'ny firenena?
Lohalaharana i Iran amin'ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra amin'ny maha-iray azy amin'ireo firenena voalohany izay nanjary nalaza be ny bilaogy. Na dia izany aza, tsy nahavita naharaka ny hafainganana izy. Ny karazana median'olon-tsotra, na dia ao anaty aterineto aza, dia tokony hampiroborobo ana amin'ny alalan'ny fihaonana sy seminera ary koa ny orinasa izay manohana ny fivelomany. Saingy tsy izany no misy ao Iran.
Manana drafitra hanombohana dikan-teny Anglisy amin'ny Balatarin ve ianao?
Tsy ho ela. Amin'izao fotoana izao, mifantoka amin'ny tetikasa hafa aho, Adoptic.com , izay aingam-panahy tamin'ny traikefa azoko tamin'ny Balatarin. Ny hevitra dia ny hamela ny bilaogera hampiroborobo ny votoatiny amin'ny fampiasana ny sehatra bilaogin'izy ireo manokana na ny an'ny hafa. Miezaka mamorona fomba malama tanteraka amin'ny fitadiavana sy fampiroboroboana votoaty aho. Misy ihany koa ireo algorithma mahafinaritra marobe izay ampiasaina ao anatin'ny dingana.
Misy hevitra zaraina amin'ny mpamaky antsika ve?
Miezaka hanana hevitra vaovao aho. Mora variana amin'ny zavatra ataontsika isanandro isika. Zavatra iray ataoko ny mividy gazety vaovao sy kisendrasendra isaky ny mandeha fiaramanidina. Manome ahy hevitra avy amin'ny sehatra maro samihafa izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/23/109157/